Fikradda iOS 16 waxay keentaa kala qaybsanaan muuqaal iyo widgets shaqeeya oo badan iPhone | IPhone news
Fikradda iOS 16 waxay keentaa Muuqaalka Kala-baxa iyo widgets shaqaynaya iPhone-ka
Angel Gonzalez | | macruufka 16, Noticias
Sannad cusub ayaa dhammaanaya oo uu la socdo dhacdooyin taxane ah oo calaamad u ah guulo cusub oo u horseeday Apple Big ee heerka software iyo hardware. 2022 waxay la iman doontaa badeecooyin cusub iyo nidaamyada hawlgalka. Dhexdooda ayaan arki doonnaa iOS 16, kaas oo lagu soo bandhigi doono WWDC 2022, shirka horumarinta Apple, kaas oo ay u badan tahay in uu noqon doono qaab telematic ah mar kale inkasta oo aan wali si rasmi ah loo xaqiijin Cupertino. Si kastaba ha noqotee, xitaa haddii ay jiraan lix bilood ka hartay dhacdada iOS 16 waxay u maleynayaan inay tahay Imaatinka View Split ee iPhone, muuqaalada cusub ee widgets-ka iyo xarun cusub oo kantarool ah iyo sidoo kale dib u habeynta aaladaha iPhone-ka.
1 Weli waxaa jira iOS 16 ... laakiin waxaan horay u haysanay fikradaha ugu horreeya
2 Astaamaha ka dhigi doona faraqa iOS kale
Weli waxaa jira iOS 16 ... laakiin waxaan horay u haysanay fikradaha ugu horreeya
IOS-ka ugu faa'iidada badan abid. Tani waa macruufka 16. Waxaad ku tidhaahdaa hello in badan oo habayn la widgets interactive iyo icons, multitasking fudud, Crypto Wallet dhisay galay Apple Pay, Had iyo jeer-On-Muujin la Smart Context, Xarunta Xakamaynta cusub, oo lagu daray waxqabadka wanaagsan, xasiloonida iyo muddada batteriga.
Nidaamyada hawlgalka Apple had iyo jeer waxaa ku jira war wanaagsan oo isbeddel ku sameeya kuwii hore. Dhab ahaantii, WWDC had iyo jeer waa dhacdo ku wareegaysa software-ka iyo dhammaan hawlaha la isku daray si ay u bilaabaan bixinta beta ee nidaamyadan horumarinta. Juunyo soo socda waxaan arki doonaa beta-yada ugu horreeya iOS 16, nidaamka hawlgalka kaas oo Fikradaha ugu horreeya ayaa durba bilaabay in la arko. Xaaladdan oo kale waxaan leenahay fikradda waxaa sameeyay isticmaale @ Kevin0304_.
Mid ka mid ah hawlaha ugu horreeya ee ay ku biirto fikradda waa Kala qaybsan Muuqaal, taas oo aan si fiican ugu naqaan iPadOS, taas oo u oggolaan doonta iPhone inuu qaado tallaabo kale oo wax soo saar leh oo leh qalabyada iyo hawlahooda badan. Thanks to shaqadan waxaan haysan karnaa laba apps oo isku mar furan oo loo qaybiyay bartamaha shaashadda. Intaa waxaa dheer, hagaajinta hawlaha badan waxay u oggolaanaysaa in la bilaabo abka sabaynaya kuwaas oo la falgali kara abka kale ee furan ee gadaasha. Caqabad weyn oo la tixgelinayo xajmiga shaashadaha iPhone.
IOS 15.2: Kuwani waa dhammaan wararkii ugu dambeeyay
Astaamaha ka dhigi doona faraqa iOS kale
El xarunta cusub ee kantaroolka waxay soo bandhigaysaa curiyayaasha jiifka ah halkii ay ka ahaan lahaayeen dhammaan kuwa labajibbaaran oo qabsan doona ballaca shaashadda oo dhan. Intaa waxaa dheer waxaa jiri lahaa a Macnaha Ugu Wanaagsan taasi waxay ku siinaysaa habab-gaaban oo ku salaysan talooyinka isticmaalka isticmaalaha iOS 16. Sida xarunta xakamaynta, widgets-ka dib ayaa loo qaabayn doonaa isagoo leh hawlo badan iyo is dhexgal. Tusaale ahaan, in kontoroolka dib-u-ciyaarista muusiga Apple laga yaabo in lagu sameeyo guga halkii laga heli lahaa xarunta wargelinta ama xarunta kantaroolka, tusaale ahaan.
Sidoo kale way is dhexgalaysaa maamulka bitcoin iyada oo loo marayo Apple Pay iyo sidoo kale nidaam loogu talagalay wax ka beddel IOS 16 icons iyada oo loo marayo xirmooyinka icon. Sidan ayaan ku soo ceshan karnaa summada iOS-kii hore ama waxaan siin karnaa wax ka beddel dheeri ah qalabkeenna. Iyo, ugu dambeyntii, digniin dhibsado in batterigeena sii dhammaanayo ayaa sidoo kale meesha laga saaray, taas oo aan hadda ahayn sanduuq pop-up ah oo mashquuliya oo ka careysiiya isticmaalaha si uu u muuqdo qaabka xariijinta ee xarunta ogeysiiska taas oo u oggolaanaysa in ay la falgalaan dhaqaaji habka badbaadinta tamarta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Fikradda iOS 16 waxay keentaa Muuqaalka Kala-baxa iyo widgets shaqaynaya iPhone-ka
Sannad kasta waa fikrado saafi ah oo isku mid ah iyo dhamaadka marka ay bilaabaan nooca IOS kaliya waxay leeyihiin 5% waxa ay ku muujinayaan fikradaha iyo isku mid ah IOS caajis ah oo nagu qasbaya qaar badan oo naga mid ah inay sii wadaan isticmaalka android.
Ku jawaab tito
Sida loogu biiro laba sawir ama ka badan iPhone ama iPad
Sida loo furo isku xirka Spotify ee Apple Music (iyo lidkeeda) MusicMatch